Mamelombelona ny Kobo Mini izy ireo amin'ny fanovana azy ho GPS | Ireo mpamaky rehetra
Mamelombelona ny Kobo Mini izy ireo amin'ny fanovana azy ho GPS
Ny isan'ny Amazon eReaders amidy dia betsaka ary izany no mahatonga azy io ho iray amin'ireo eReaders ankafiziny indrindra raha ny resaka fanodinana, amin'ny fampiasana azy amin'ny tranga maro ho mpanara-maso ara-toekarena na ao anatin'ny fitaovana marani-tsaina. Saingy tsy midika izany fa io ihany no fitaovana afaka ampiasaina faharoa. Namelombelona indray ny mpampiasa iray ny Kobo Mini anao hamoronana GPS mahaliana Miasa tanteraka amin'ny tara-masoandro izy io.
Ny fitaovana namboarina dia miasa tanteraka ary na ny mpampiasa maro aza tsy maintsy manao izany jereo ny manavaka ity gadget ity amin'ny mpamaky ebook marina.
Ny Kobo Mini dia azo vidiana amin'ny tsenan'entana faharoa amin'ny vidiny tena ambany
Mazava ho azy, ny Kobo Mini dia tsy manana singa GPS, na zavatra mitovy amin'izany, hanonerana io tsy fahampian'ny mpampiasa mpanamboatra azy io, anaram-bosotra Tweepy, no nanokatra ilay fitaovana ary tsy vitan'ny hoe nampifandray ny singa GPS ianao fa nanova ny batterin'ilay fitaovana ihany koa amin'ny alàlan'ny bateria ivelany 3.800 mAh, bateria iray izay hanome ny mpampiasa fizakantena lehibe kokoa. Mazava ho azy, ny singa GPS dia tsy tafiditra ao anatin'ny Kobo Mini, izay no antony namoronan'i Tweepy casing fanampiny io tweepy io dia nifamatotra tanteraka tamin'ilay singa, tsy azo jerena amin'ny maso, araka ny ahafantaran'ny maro aminareo.
Raha vao tafapetraka dia nosoloina ny rindrambaiko Kobo ny fampiharana XCSoar, fampiharana GPS izay azo tanterahina amin'ny rafitra fiasa Kobo Mini tsy mila fanovana mahery vaika. Ny valiny dia tsy vitan'ny tsara fa miasa ihany koa, afaka averina im-betsaka araka izay tadiavintsika. Noho izany dia tsy maintsy manaraka ny dingana fotsiny isika ny làlan'ny fanorenanao.
Ny Kobo Mini dia eReader misy efijery kely kely izay nanana ny fiainany ary izao dia izao vao azo amin'ny alàlan'ny tsena faharoa ary amin'ny vidiny ambany dia ambany. Izany no mahatonga ity eReader ity ho kandida tonga lafatra hampiasaina indray amin'ny asa hafa, toy ny amin'izao fotoana izao amin'ny Basic Kindle.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » kobo » Mamelombelona ny Kobo Mini izy ireo amin'ny fanovana azy ho GPS
Connecticut Library dia hanana fampiharana manokana ho an'ny ebooks
Goodreads dia afaka mifehy sy manitsy ny fanamarihana ny ebooks antsika amin'ny Kindle